အာဖဂန်တွင် ဆိုးရွားလာသောအခြေအနေသည် အမေရိကန်က ကြိုတင်မှန်းဆထားသည်ထက် “ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်း” ဘိုင်ဒန် ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်တွင် အာဖဂန်ဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော သမ္မတဘိုင်ဒန်အား ဩဂုတ် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ဩဂုတ် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဆိုးရွားလာသောအခြေအနေသည် အမေရိကန်က ကြိုတင်မှန်းဆထားသည်ထက် “ပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်း” ၊ သို့သော်လည်း ကာလရှည်ကြာစွာစစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံမှ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ၎င်းရပ်တည်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ့်ဒေးဗစ်မှ အိမ်ဖြူတော်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက် ပြုလုပ်သည့် အာဖဂန်ဆိုင်ရာ တီဗီရုပ်သံမိန့်ခွန်းတွင် သမ္မတဘိုင်ဒန်က အာဖဂန်မှ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် “ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ကျွန်တော်အတိအလင်းရပ်တည်ပါတယ်” ၊ “ ကျွန်တော်တို့ ကြိုတင်မှန်းဆထားတာထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကတော့ အမှန်တရားပါ” ဟုလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ဘိုင်ဒန်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်က ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် အာဖဂန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းက နိုင်ငံအား စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြခြင်း နှင့် အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင် တိုက်ခိုက်ရန် စိတ်ဆန္ဒမရှိခြင်းအပေါ် ပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့သည်။
တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကဘူးလ်မြို့တော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပြီး သမ္မတနန်းတော်အား ထိန်းချုပ်လိုက်စဉ်အတွင်းမှာပင် အာဖဂန်သမ္မတ Mohammad Ashraf Ghani သည် တနင်္ဂနွေနေ့ ညပိုင်းက နိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာ အာဖဂန်မှာ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ရှိနေခြင်းကို အဆုံးသတ်ဖို့ အတွက် အခုချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ဘိုင်ဒန်က ဆိုသည်။ “ အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင် သူတို့နိုင်ငံ အတွက် သူတို့တိုက်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒမရှိတဲ့ စစ်ပွဲမှာ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့က ဝင်တိုက်ပေးဖို့ အသေခံပေးဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ” ဟုလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် အာဖဂန်နိုင်ငံသို့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆,၀၀၀ ခန့်စေလွှတ်ရန် အမိန့်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Biden says deteriorating situation in Afghanistan “did unfold more quickly” than U.S. anticipates
WASHINGTON, Aug. 16 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden said Monday that the deteriorating situation in Afghanistan “did unfold more quickly” than the United States had anticipated, adding, however, that he stands by the decision to withdraw U.S. troops from the war-torn country.
Returning to the White House from Camp David ahead of schedule to deliver televised remarks on Afghanistan, Biden said: “I stand squarely behind my decision” to withdraw U.S. troops from Afghanistan, adding “the truth is this did unfold more quickly than we had anticipated.”
“If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan, now, was the right decision,” Biden said. “American troops cannot and should not be fighting inawar and dying inawar that Afghan forces are not willing to fight for themselves.”
The United States had ordered to deploy roughly 6,000 troops to Afghanistan to support the personnel evacuation mission. Enditem
Photo taken in Arlington, Virginia, the United States, on Aug. 16, 2021 showsascreen displaying U.S. President Joe Biden delivering remarks on Afghanistan at the White House in Washington, D.C.